Maxaa lagu gartaa Qofka qaba Cudurka Sokorowga ama Macaanka? | Goobsan Media Inc
Home Caafimaadka Maxaa lagu gartaa Qofka qaba Cudurka Sokorowga ama Macaanka?
Maxaa lagu gartaa Qofka qaba Cudurka Sokorowga ama Macaanka?
Cudurkani waxaa lagu gartaa dhawr calaamadood oo ay ugu muhiimsan yihiin: 1. Kaadida oo badata, qofkuna hayn waayo,lagana yaabo inay marmar ka baxsato. 2. Haraad siyaado ah, oo uu habeenkii xataa biyo u kaco. 3. Gaajo badan ama safrad. 4. Miisaanka qofka oo luma (Caatow). 5. Araggiisa oo xumaada.
Si kastaba ha ahaatee, Nooca labaad wuxuu u soo siyaadaa si tartiib-tartiib ah, dadka qaarkoodna iyadoo sonkorta dhiigu sarayso ayaan wax calaamad ahi ka muuqan, sidaas awgeed waxaa muhiim ah in laga feejignaado.
Calaamadaha Nooca 1aad: Sida badan bukaanka qaba nooca 1aad calaamaduhu si degdeg ah ayay uga soo if-baxaan, cudurkana horay ayaa laga gartaa, calaamadihiisana waxaa ka mid ah: · Oon Siyaado ah · Kaadi badan · Miisaan lumid · Daal & Caajis · Lalabo ama yalaalugo · Matag
Calaamadaha Nooca 2aad: ·Oan Siyaado ah · Kaadi Siyaado ah · Xiisaha Cuntada oo siyaada (Appetite) · Daal Iyo Caajis · Aragga oo xumaada · Bogsadka nabarada oo daaha. · Ragganimada oo yaraata (Galmada).
Haddaba qofkii isku arka calaamadahaas waa inuu degdeg ula xiriiraa dhaqtar hubiya, cudurka sonkorowga qofka muddo dheer ayuu u qarsoonaan karaa, calaamadaha qaarna aysan ka muuqan.
Ra’iisul Wasaare Rooble oo la kulmay safiirada xubnaha ka ah Golaha Nabadda iyo Amniga Midowga Afrika